Minyengetero Pamusoro Pouroyi naJezebheri | MINYENGETERO MARI
musha Uncategorized Minamato Pamusoro Pouroyi naJezebheri
Munyaya yanhasi tinenge tichiita minamato vachipesana neuroyi naJezebheri. uroyi chiito chekushandisa masimba erima kuita minana uye kuratidza zvishamiso. Kuita kwehuroyi hakuna kungotanga; zvakatanga kubvira panguva dzevarume vekutanga murugwaro. Imwe yemaitiro anoshandiswa nasatani kunyengedza vanhu vaMwari ndeyekuroya. Hazvishamise kuti, munhu anogona kuve anopinda nemweya wakashata asi oita zvishamiso.
Zvinorangarirwa kubva mumagwaro matsva kuti mushure mekufa kwaSamueri, Mambo Sauro, akashaiwa zvinhu zvemweya; akange asisakwanise kugashira meseve zvemweya sepakutanga Muporofita Sameri. Yasvika nguva Mambo Sauro yaaida huchenjeri hwaMwari hwemaitiro ekuenderera mberi nehondo yevaFirisitia.
Panguva iyoyo, Mambo Sauro akange abvunza vafemberi vakasiyana, vaporofita nevafemberi, asi hapana aigona kupa mhinduro nekukurumidza kune zvaidiwa naSauro. Uye sezvo Mambo Sauro aive asina mweya waMwari muhupenyu hwake, aive bofu uye matsi kuna Mwari. Sarudzo yekupedzisira yaSauro yaive yekudaidza mweya wemuporofita akafa Samuel. Mambo Sauro vakasangana nemuroyi weEndor kuti vamubatsire mukukumbira mweya waSamuel, kungowana mhinduro dzezvakavanzika zvake. (Ona 1 Sameri 28: 6-25).
Iyi yaive nhoroondo yeuroyi uye huroyi murugwaro. Izvo zvakakosha kuziva ndezvekuti uroyi hune vanhu nenzira imwecheteyo Simba reMweya Mutsvene rinopinza vanhu doro. Uye nguva zhinji, vamwe vanhu havagone kuudza mutsauko pakati peMweya usakachena neMweya chaiwo wezvokwadi, unova iwoMweya Mutsvene. Uroyi hunobatanidza zvese zvakaipa.
Panguva iyo nyaya yaMambo Sauro neWaiti weEndor yaiita kunge inomiririra zvakakwana zviitiko zvakasviba zveRoyi, pane mumwe mukadzi akafananidzwa nen'anga murugwaro. Mambokadzi Jezebheri, mudzimai waMambo Ahabi, mutongi weNorthern Isreal, muenzaniso wakakwana weuipi. Kunyangwe iye angave asina masimba emadhimoni ayo anogona kumuita muroyi, zvisinei, hunhu hwake hwakaipa hwakaita kuti huchimanikidze kuti atumidzwe kunzi muroyi. (Ona 1 Madzimambo 16: 1-33, 1 Madzimambo 19, 1 Madzimambo 21.)
Zvichakadaro, chirevo chaJezebheri chakachena uye chakasununguka kubva pakubata kwemvura. Nehurombo, mukadzi Jezebheri musiyano wakakwana wezita rake. Iye akange ari mhare, yakaipa, uye anotyisa mambokadzi weNorthern Isreal. Iye ainyengera zvikuru, aine dhimoni, aigara achinamata zvidhori, uye aine huori.
Jezebheri aive muparadzi, mbavha, pfambi, senge anga asina kumbobvira ane chikamu chakanaka. Aitya kwazvo. Kunyangwe Muporofita aigona kumira pamberi pamambo uye akazivisa kuti kwaisazove kunaya muIsreal uye nedenga rakavharwa kwemakore matatu nehafu nemashoko aMuporofita. Eriya aigona kuraira moto unoparadza wakabva kudenga kuti uparadze Vaporofita vaBhaari, asi wakati achiona Jezebheri, akaenda kuzvitsitsinho, 1 Kings 18. Izvi zvinotsanangura chokwadi chekuti Jezebheri aityiwa zvakanyanya kunyangwe Dhiyabhori iye amene.
Mushure mambokadzi Jezebheri, hapana munhu akambotumidza mwana wavo kana wadhi zita raJezebheri. Izvi hazvisi nekuti pane chakaipa muzita, asi nekuti munhu wekutanga akapa zita iro aive asiri hunhu hunofanirwa kutevedzera. Zvinoreva izvi ndechekuti hapana murume anomboda kuzvibatanidza kune chero chinhu chisina kunaka.
Mweya waJezebheriya, kana Mweya waJezebheri unoreva huipi, kunamata zvidhori, chipfambi uye marudzi ese ezvitadzo zvehupombwe nekushata. Kana Varoyi vari kutambudza hupenyu hwemurume kana paine Mweya waIzebheri muhupenyu hwemurume chero murume, akadaro munhu anozove pasina. Munhu akadaro haazokwanisi kusiira kuzere kugona izvo zvakatemerwa Mwari nemunhu akadaro. Kungofanana naMambo Ahabhu anga akangogara pachigaro uye Mambokadzi Jezebheri akabata chiremera, saka zvichavewo kune chero munhu ane hupenyu huri kutambudzwa naJezebheri. Rudzi irworwo rwemunhu richava nezvakawanda, munhu akadaro anenge aine zviroto uye zvishuwo, asi hapana chimwe chazvo chichaitika.
Chiri kunetsa ndechekuti munhu akadaro achange ave kure kuna Mwari, kungofanana naMambo Sauro naMambo Ahabi vaive zvino vabva kuna Mwari. Ahabu aive murume wechihebheru; vanoshumira Jehovha; zvisinei, mushure mekunge aroora Jezebheri, akatanga kushumira Bhaari. Panofanirwa kuti munhu wese asununguke kubva muhomwe dzeuroyi uye akunde mweya wega weJezebheri muhupenyu hwedu.
Ndingaite Sei Kuti Ndikunde Varoyi Uyeomweya waJezebheri?
Masimba aya anogona kukurirwa neminamato. Munamato ndiyo kiyi yekudzvinyirira dhiabhori uye kuparadza masimba ese euroyi uye jezebel. Kana iwe uri munamato unonamata, hapana muroyi anogona kuuya pedyo newe. Hupenyu hwako huchave pamoto kuna Mwari. Hapana nhunzi inobata pane inopisa stove. Kuburikidza neminamato isu takaburitsa masimba emweya kusimbisa masimba erima, isu patinoita hondo dzekunamata tichirwa nemasimba euroyi, masimba ese euipi anopfugama pamberi pedu.
Mudikani handizive kuti dhiyabhorosi akakutambudza kwenguva yakareba sei nouroyi, manheru ano uchasunungurwa muzita raJesu Kristu. Ndinokukurudzira kuti utore hupenyu hwako hwekunamatira zvakanyanya uye iwe uchaona dhiabhori achiwira patsoka dzako. Takanyora runyorwa rwemunamato kupokana neUroyi naJezebheri, tsvaga minamato pazasi.
Ishe Jesu, ndinokutendai nekutipa zita renyu. Ini ndinokukudza nekuda kwesimba riri muzita rako neropa rako, zita rako ngarisimudzwe muzita raJesu.
Baba Tenzi, rugwaro runoti isu takapihwa zita riri pamusoro pemazita ese kuti panotaurwa zita iro mabvi ese anofanira kupfugama uye rurimi rwoga rureurure kuti ndiMwari. Ndinosunga mweya yose yeUroyi muhupenyu hwangu muzita raJesu.
Ini ndinouya kuzopesana nesimba roga roga rechidhimoni, simba rese risiri dzvene riri kuyedza kutonga hupenyu hwangu. Ndinovaparadza neropa regwayana.
Ishe, ndinotyora zvidimbu zvese zveuroyi muhupenyu hwangu, ndinozviisa pasi pedzidziso dzeMweya Mutsvene, ndinozvipa kuti ndive nemweya wakazara waMwari, muzita raJesu.
Baba Ishe, ndinoparadza kubata kweJezebheri muhupenyu hwangu. Ini ndinouya kuzopesana nechero munhu ari muchimiro chaDhimoni wedhimoni; Ndinovaparadza neropa regwayana.
Baba ishe, Ndinozivisa rusununguko rwangu kubva kumasimba erima regehena, ini ndinotora nhapwa dzesimba rerima muzita raJesu.
Ishe Mwari, ndinouya kuzopesana nemweya wega wekushushikana muhupenyu hwangu; kuratidzwa kwese kunoda kuoneka senge mweya waMwari unopedzwa nemoto muzita raJesu. Baba Tenzi, ndinonamata kuti mutungamire kufunga kwangu uye chikonzero, uye muve nekutora kuve hwangu hwese muzita raJesu.
Ini ndinotema kusununguka kwangu kubva pasimba rose raJezebheri uyo anoda kutora hutongi hwehupenyu hwangu. Ini ndinokuzivisa nhasi kuti hupenyu hwangu ndehwaJesu; saka, muti wega usina kudyarwa nababa vangu unodzurwa muzita raJesu.
Wese madhimoni Jezebel akapika kuti achanditungamira mukuparadzwa, ndinosimbisa kutsiva kwaMwari pamusoro pavo muzita raJesu.
Bhaibheri rinoti, izwi raIshe rine simba, izwi raIshe riri pamusoro pemvura, izwi raIshe rizere nekuremekedza, Ishe, ndinonamata kuti muve nokutaura shoko renyu rehungwaru muhupenyu hwangu nhasi. Ini ndichasunungurwa kubva kunharaunda yeuroyi, kwandakanga ndakapotwa nemuzita raJesu.
Nekuti zvakanyorwa kuti iye kuti mwanakomana wakasunungurwa wakasununguka zvirokwazvo. Ini ndinoreurura kusununguka kwangu pachivi nekuipa muzita raJesu. Ini ndinoreurura rusununguko rwangu kubva kun'anga neuroyi muzita raJesu.
Ndinoshora kuzvitsaurira kwangu kuna Kristu, kubvira nhasi, handisisiri munhu werima, handisisiri muranda kuna Jezebheri muzita raJesu.
Rugwaro rwunoti nekuti Hatirwi nenyama neropa asi masimba nenzvimbo munzvimbo dzerima. Ini ndinotora nhumbi dzose dzokurwa nadzo dzaMwari muzita raJesu. Ini ndinotora chombo chehondo yangu muna Kristu Jesu, uye ndinotora zasi readhiabhori pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu.
Previous nyayaMinamato Pamusoro peKukundikana Pane Edhi Yekutadza
inoteveraMunamato Kumiririra Zviroto Zvakashata Panguva Yepamuviri
Che kelvin Chikumi 17, 2020 Panguva ya2: 52 pm
Samuel Rao Chikunguru 25, 2020 At 7:16 am
Johani Peter Nyamavhuvhu 24, 2020 At 1:38 am
Idoia Kubvumbi 16, 2021 At 7:01 am
Dejad de decir que la brujería es mala, es una creencia igual de válida que la vuestra, además que a Jezabel the poneís como una mujer manipuladora y malvada cuando simplemente era una reina que no seguía la religionión de Israel… No hace falta que " contra la brujería ”. Las personas que siguen esa práctica no son malas y no tienen nada e contra vuestra, vive y deja vivir, estaís super desinformados sobre esta práctica… Informaros antes de hablar.
Kuna shefu Gunyana 8, 2021 At 3:20 am
Con el debido repeto que nos merecemos todos, creo que quien tiene que informarse es usted. Tome la palabra de Dios y lea y verá que la brujería está en contra de la voluntad de Dios porque son obras del diablo y el que hace las obras del diablo está en contra del dador de la vida y de nuestra salvación que es Jehová Todopoderoso, Supremo y Soberano Dios
Ивона Nyamavhuvhu 15, 2021 Na 4:02 pm
zachary smith Nyamavhuvhu 3, 2021 At 7:57 pm
Uroyi hwaive basa kwandiri izvo zvandisingazive kuti mukadzi wangu uye mhuri yangu yaive muhuroyi. Pane imwe nguva akataura kubva mupasipoti kuti vanhu vanofunga amai vake naiye muroyi. Haana kumbomutora zvakakomba akacheka hukama nemhuri yake.
Mapisarema 109 Minamato Yekuregererwa Uye Kutsiva